LO oo dalbanaya joojinta siyaadinta canshuuraha degmooyinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hogaamiyaha ururka shaqaalaha LO ee Kar-Petter Thorwaldsson. sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
LO oo dalbanaya joojinta siyaadinta canshuuraha degmooyinka
LO oo rabta in canshuuraha degmooyinka aan la kordhin
La daabacay tisdag 4 april 2017 kl 10.23
Hogaamiyaha ururka shaqaalaha LO Karl-Petter Thorwaldsson ayaa imminka raba in la joojiyo canshuuraha degmooyinka ee la kordhinayo, si buu yiri loo yareeyo in bulshada dalkaani ay sii kala faquuqanto.
Ka hor inta uusan usbuucaan dhammaadkiisa bilaaban shirweynaha guud ee xisbiga Sooshal-demoqoraadi-gu, ayaa urur weynaha shaqaalaha ee LO wuxuu shirkaas hor dhigey shuruudo aad iyo aad u adadag oo la xiriira in xad loo yeelo canshuuraha degmooyinka.
Hogaamiyaha ururka shaqaalaha LO Karl-Petter Thorwaldsson ayaa isagoo arrinkaas ka hadlaya wuxuu yiri sidan soo socota:
-Badanaa dadka mushaarada hooseeya qaata, ayaa mushaaradooda waxaa laga jaraa canshuuro aad iyo aad u sareeya, taasna waa tana aan rabno in wax laga badalo.
Hogaamiyaha ururka LO ayaa intaas ku darey in meeshii canshuuraha degmooyinka laga siyaadin lahaa taas badalkeeda ay dawladda dhexe ee dalkaani degmooyinka u siyaadiso caawimaadaha dhaqaale ee ay degmooyinkaas u fidiso.